भर्खरै ८३ जना सवार विमान दु’र्घटना’ग्रस्त ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/भर्खरै ८३ जना सवार विमान दु’र्घटना’ग्रस्त !
भर्खरै ८३ जना सवार विमान दु’र्घटना’ग्रस्त !
2,810 Less thanaminute
अफगातिस्तानमा एरियाना अफगान एयरलाइन्सको विमान दु’र्घटनामा परेको छ। सोमबार पूर्वी अफगानिस्तानमा विमान दु’र्घटनामा परेको हो। दु’र्घटनामा भएको क्ष’तिको विवरण भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। एरियाना न्युजका अनुसार उक्त विमानमा ८३ जना सवार थिए।
उक्त विमान हेरातदेखि काबुलको लागि उडेको थियो। दु’र्घटना गाज्नी प्रान्तमा भएको हो। त्यस्तै इरानको एक विमान धावन मार्गबाट चि’प्लिएर मुख्य सडकमा पुगेको छ। विमानमा कुनै क्षति नभएपछि इरानको क्यास्पियन एयरलाइन्सको विमान ठूलो दु’र्घटनाबाट जो’गिएको बताइएको छ।
उक्त विमानमा १ सय ३५ यात्रु सवार थिए। दु’र्घटनामा कुनै व्यक्ति घा’इते नभएको सीएनएनले जनाएको छ। सार्वजनिक भएको भिडियो तथा फोटोमा ठूलो विमान सडकको बीचमा रो’किएको देखिएको छ। इरानी यात्रुबाहक बिमान बान्दर–ए–मासार बिमानस्थलमा सोमबार अ’वतरण गर्नेक्रममा उ’छिट्टिएर नजिककै सडकमा आ’कस्मिक अवतरण गरेको इरानी अधिकारीहरुले बताए ।
राज्य स’ञ्चालित टेलिभिजनले स्थानीय अधिकारीहरुको भनाई उद्धृत गर्दै बिमानमा सवार यात्रुसमेत चालक दलका सबै सदस्य स’कुशल रहेको जनाएको छ । खु’जेस्तान प्रान्तका नागरिक उड्डयन सेवाका प्रमुख मोहमड्रेजा रेजाइयाले बिमानका पाइलटले विमानस्थलमा बिमान ढिला अवतरण गराएका कारण बिमान अ’नियन्त्रित भएको बताए ।
इरानको क्यास्पियन एयरलाइन्सको स्वा’मित्वमा रहेको म्या’कडोनल ड’ग्लस बिमान राजधानी तेहरानको मेहराबाद बिमानस्थलबाट उडेको थियो । बिमानमा १३५ जना यात्रु र चालक दलका सदस्य थिए । टेलिभिजनले बिमानका सबै यात्रु सु’रक्षित रहेको छ । बिमानमै या’त्रारत टेलिभिजनका पत्रकारले सडकमा बिमान अबतरण गर्नेक्रममा बिमानका पाङ्ग्राहरु फु’टेको बताए ।
इरानी नागरिक उड्डयन सं’स्थाले बिमान दु’र्घटनाका बारेमा छा’नबिन शुरु गरिसकेको जनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान बि’रुद्ध आर्थिक ना’काबन्दी लगाएपछि विश्वका चर्चित बिमान कम्पनीहरु एयरबस र बोइङलाई आफ्ना जहाज इरानलाई बिक्री गर्न प्र’तिबन्ध लागेको छ ।
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतका स्वर्गीय बाबुमा कोरोना पुष्टि, मलामी गएका २२ जना व्यक्ति कोरोना लाग्ने चिन्तामा